Idaacadda Daljir oo la guddoonsiiyay shahaado sharaf iyo abaal marin kale. [Akhris …] – Radio Daljir
Idaacadda Daljir oo la guddoonsiiyay shahaado sharaf iyo abaal marin kale. [Akhris …]
Garowe, Aug 02 – Idaacadda Daljir oo ahayd idaacadda ugu ballaadhan ee ay dadka Puntland ku dhaqan si habsami ah ugala socdeen tabinta damaashaadyada iyo munaasabadaha ka kala dhacayay magaalooyinka Puntland shalay iyo xalay ayaa waxa ay ku guulasyatay shahaado sharaf xalay lagu guddoonsiiyay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
Wasiiradda arrimaha qoyska Marwo Caasha Geelle Diiriye ayaa xalay intii lagu guda jiray munaasabadda waxa ay shahaado sharaf sare guddoonsiisay idaacadda Daljir, sidoo kale lacagtii ugu badnayd ee la siiyay warbaahinta kale qaarkood iyo shaqsiyaad.
Adduun lacageed oo gaadhay 30 Milyan oo lacag Soomaali ah ayaana halkaas lagu guddoonsiiyay idaacadda Daljir.
Daljir ayaa si ay dhagaystayaashu ka mahadnaqeen goob kasta oo ay ka joogaan magaalooyinka Puntland ugu gaadhsiisay dhacdooyinkii munaasabadaha shalay iyo xalay ee lagu xusayay 11 guuradii ka soo wareegtay yagleeliddii Puntland.
Idaacada Daljir ayaa laga dhegaystaa magaalooyinka iyo miyiga fog ee gobollada Puntland.
Halku-dhegga idaacada Daljir ayaa ah tebinta warar ku salaysan dhabta, ka tarjuma dareenka qubanaha, iyo baahinta barnaamijyo tayo leh oo ka madhan lur bulsheed.
Waxaa iyana jiray idaacado kale, oo ay ka mid tahay idaacadaha bulshada ee Galkacyo, iyo idaacada Garowe, oo dawrkooda warbaahineed la aqoonsaday halka telefishinada ETN & SBC oo laga daawado Puntland-na la guddoonsiiyey abaal marin.